Mwepu nke ntaramahụhụ isi obodo na Canada
Ọnụ ọnụ na-egbu ọchụ nke Canada na-anọgide na-adị ala n'enweghị ụkọ ntaramahụhụ
Mwepụ nke ntaramahụhụ obodo site na Usoro Criminal Criminal na 1976 emebeghị ka mmụba na ọnụ ọgụgụ igbu ọchụ na Canada. N'ezie, Statistics Canada na-akọ na ọnụ ọgụgụ igbu ọchụ na-arịwanye elu kemgbe afọ iri asaa na asaa. N'afọ 2009, ọnụ ọgụgụ igbu ọchụ nke mba Canada na 1.81 gburu mmadụ 100,000, ma e jiri ya tụnyere afọ ndị 1970 mgbe ọ dị gburugburu 3.0.
Ọnụ ọgụgụ nke igbu mmadụ na Canada na 2009 bụ 610, otu dị ala karịa 2008.
Ọnụ ọgụgụ igbu ọchụ na Canada bụ ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị nọ na United States.
Okwu nke Canada maka igbu ọchụ
Ọ bụ ezie na ndị na-akwado ọnwụ ọnwụ nwere ike ịkọ ntaramahụhụ obodo dị ka ihe na-egbochi igbu mmadụ, nke a abụghị nke ahụ na Canada. Amụma ndị dị ugbu a na Canada maka igbu ọchụ bụ:
Ọnwụ ọgụgụ nke mbụ-a na-ebi ndụ n'enweghị ohere ikwu okwu maka afọ 25
Ọkara nke abụọ igbu ọchụ - a na-ebi ndụ n'enweghị ohere ikwu okwu maka ọ dịkarịa ala afọ iri
Mgbubiiwu - a na-ebi ndụ na nkwenye nkwenye mgbe afọ asaa gasịrị
Mkparịta ụka siri ike nke eji megide ntaramahụhụ isi obodo bụ ike imehie. Nkwenye na-ezighị ezi na Canada nwere nnukwu profaịlụ, gụnyere
David Milgaard - mara ikpe ọnwụ maka ịnwụ anwụ nke 1969 nke Gail Miller, onye enyemaka nọọsụ Saskatoon. Milgaard nọrọ afọ iri abụọ na abụọ n'ụlọ mkpọrọ, Ụlọikpe Kasị Elu kwadoro nkwenye Milgaard n'afọ 1992, akwụkwọ DNA kpochapụrụ ya na 1997. ọchịchị Saskatchewan nyere Milgaard $ 10 nde maka nkwenye na-ezighị ezi ya.
Donald Marshall Jr. - mara ikpe na 1971 igbu ọchụ nke Sandy Seale na Sydney, Nova Scotia. A hapụrụ Marshall na 1983 mgbe ọ nọrọ afọ 11 n'ụlọ mkpọrọ.
Guy Paul Morin - mara ọnwụ mkpọrọ na 1992 maka nkwụsị mbụ nke onye agbata obi dị afọ itoolu nke agbata obi Christine Jessop, Morin na-anwale na 1996 site na nyocha DNA. Morin na nne na nna ya natara nde $ 1.25.
Thomas Sophonow - nwalere ugboro atọ ma kpee ikpe ugboro abụọ nke igbu ọchụ 1981 bụ Barbara Stoppel na Winnipeg, Manitoba. Egburu nkwenkwe abụọ ahụ na mkpesa, Ụlọikpe Kasị Elu nke Canada kwadoro ule anọ nke Sophonow. Ihe gbasara DNA kpochapụrụ Sophonow na 2000, e nyekwara ya $ 2.6 ụgwọ.
Clayton Johnson - mara ikpe na 1993 banyere nkwụsị nke nwunye ya. N'afọ 2002, Ụlọikpe Mkpegharị Ikpe nke Nova Scotia kpughere nkwenye ahụ ma nye iwu ka e nwee ikpe ọhụrụ. Ogbue kwuru na ọ dịghị ihe ọhụụ ọhụụ na Johnson mere ka ọ nwere onwe ya.
Enyemaka Onyinye Ụtụ Isi Site na Ahụhụ Ụtụ Ụgwọ Canada ma ọ bụ Mmasị
Ụgwọ ụgwọ nke Canada Senators
Gịnị ka Vladimir Nabokov si n'ike mmụọ nsọ ma ọ bụ mee ka ọ dee 'Lolita'?
Nna kachasị mma na nke kachasị njọ n'Alaeze Ụmụ anụmanụ
Kedu ọrụ nke ihe ntụgharị dị na asụsụ Bekee?
Akwụkwọ Grace - Biography
Mkpụrụ nke Mmụọ Nsọ Ọmụmụ: Ịdị nwayọọ
'Ekele Gị, Chineke' Ihe Odide Gosipụtara Obiọma
Otu esi echekwa klas gị
Ndị amụma Chineke
Ekpere Maka Onyinye Asaa nke Mo Nso
Egwuregwu Ngwá Egwuregwu Nnukwu Ụzọ nke Sampled Isaac Hayes
Agha nke Narị Afọ: Agha Castillon
Biography na Profaịlụ nke Nate Diaz
Ebe ndị a na-ahụ anya: A Lee na ụlọ ndị na-ese ihe
Ọdịdị nke Ọhịa
Bob Dylan na Joan Baez: Eze na Queen of Folk
Na-agba ọsọ na nnukwu
Ndị Na-eyi ọha egwu: 'Ndị ọzọ' ndị na-abanye na-akwadoghị iwu
Uru nke ịga na nnukwu ụlọ akwụkwọ
Ajụjụ Ọnụ: Vincent Gallo na Arụmụka 'Brown Bunny'
5 Ihe omuma atu nke I nwere ike icheghari uba